စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ကွန်းတိုက်• DT2 • Downtown Dutchtown
“ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် PPP ခွင့်လွှတ်နိုင်သောချေးငွေအခွင့်အလမ်းများ” ၏ကျန်အပိုင်းကိုဖတ်ပါ။
အောက်မှာ Filed စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နှင့် Covid-19. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ 23rd, 2021 .
Dutchtown Business Showcase - Logan ၏ကလေးများပြန်လည်ရောင်းချခြင်း
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 27th, 2020
Dutchtown Business Showcase မှကြိုဆိုပါသည်။ ဒီဗီဒီယိုစီးရီးထဲမှာ၊ Dutchtown တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမှကျွန်တော်တို့ကိုကြာပါသည် Logan ၏ကလေးများပြန်လည်ရောင်းချခြင်း 3141 Meramec လမ်းမှာ။ ပိုင်ရှင် Cassandra Logan ကို Dutchtown ရပ်ကွက်တစ်လျှောက်လုံးတွင်လူသိများသည်။ အခြားအသိုင်းအဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများအနက် Cassandra သည်ထိုနေရာတွင်ထိုင်သည် DT2 • Downtown Dutchtown ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်စုစည်းရန်ကူညီသည် Marquette အဝန်းနေ့နှင့်လက်ရှိ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မိသားစုအစီအစဉ်ကိုလက်ခံပါ Dutchtown ၌တည်၏။
ကျန်တဲ့“ The Dutchtown Business Showcase: Logan's Kids Resale "
အောက်မှာ Filed စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, ဒိန်းမတ်နှင့် Dutchtown စီးပွားရေး Showcase. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ 27th, 2020 .
DT2 • Downtown Dutchtown စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား